Air Austral and Air Madagascar partnership headed for breakdown? | Airline News
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Nirodana ve ny fiarahan'ny Air Austral sy Air Madagascar?
Nirodana ve ny fiarahan'ny Air Austral sy Air Madagascar?
Air Austral sy Air Madagascar
Ao amin'ny Nosy La Réunion, voalaza fa misy ny fifanarahana fiaraha-miasa misy eo Air Austral an'ny Nosy Réunion ary Air Madagascar miatrika fanamby mitohy i Madagascar satria miditra amin'ny dingana vaovao amin'ny fifampiraharahana ny Air Austral hampihenana ny fananany 49%.
Voalaza ankehitriny fa ny fiaraha-miasa eo amin'ny Air Austral sy ny Air Madagascar, izay natomboka tamin'ny taona 2017, dia miroso hatrany amin'ny fahatapahana.
Ny Air Austral dia nandoa tsindrona renivohitra 15 tapitrisa Euros tany am-boalohany ho an'ny zana-bolany, saingy efa notaterina teto Madagasikara fa ny fandoavam-bola faharoa nifanaovana 25 tapitrisa euro dia mbola tsy voaloa araka ny nandrasana.
Samy nanamafy ny seranam-piaramanidina roa tamin'ny 2017 fa efa nahavita sy nanao sonia fifanarahana izy ireo izay ahazoan'ilay mpitatitra entana an-trano frantsay voasoratra anarana ao amin'ny Nosy Réunion hahazo tombony 49 isan-jato amin'ny kaompaniam-pirenena Madagascar.
Ny tanjon'ity ekipa ity dia ny hanatsara ny fifandraisan'ny rivotra eo amin'ireo nosy ary indrindra ny fifandraisana lava lavitra kokoa ho an'i Madagasikara sy ny Nosy Réunion.
Ny fifampidinihana tamin'izany fotoana izany dia nofaritana ho sarotra, saingy nifarana tsara daholo. Drafitra fandraharahana amin'ny antsipiriany no nifanarahana teo amin'ireo mpiray antoka, ary nanoritra ny lalana hamily ny haren'ny Air Madagascar tao anatin'ny roa taona ho avy. Ny drafitra dia nametraka fa farafahakeliny 40 tapitrisa dolara amerikana dia tokony hampidirin'ny Air Austral ao amin'ny Air Madagascar hanome renivohitra miasa fanampiny.
Air Austral dia miorina ao amin'ny seranam-piaramanidina Roland Garros ao amin'ny departemanta frantsay ampitan-dranomasina ao amin'ny Nosy Reunion any amin'ny Ranomasimbe Indianina. Ny seranam-piaramanidina dia miasa serivisy voalahatra manomboka amin'ny Nosy Réunion mankany amin'ny tanàn-dehibe France, Africa South, Thailand, ary India, ary koa toeran-kaleha marobe any amin'ny Ranomasimbe Indianina.
Air Madagascar no zotram-piaramanidina nasionalin'i Madagascar miasa any Eropa, Azia ary ny nosy afrikanina sy ny Ranomasimbe Indiana. Ny ivon-toerany dia miorina ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato eto Antananarivo. Ny seranam-piaramanidina koa dia miasa tambajotra anatiny.